Maxaa ka dhigay doorashada Somaliland mid taariikhi ah? - Caasimada Online
Home Somaliland Maxaa ka dhigay doorashada Somaliland mid taariikhi ah?
“Waa dhacdo taariikhi ah maadaamaa uusan ka qeybgalaynin madaxweynaha xilka haya” ayuu yiri Dr Michael Walls oo jaamacadda London University College oo hormuud ka ah kormeertada doorashada.
Doorashadan ayaa waxa ay sidoo kale la gaar ahayd in musharixiinta ay ka qeybqaateen dood taleefishinka si toos ah looga baahiyay oo si furan su’aalo lagu weeydiinayay.
Taleefishinka BBC-da oo kaashanaya HCTV iyo SBC TV ayaa sidoo kale maanta dood u qabanaya saddexda musharrax, waana tii labaad oo ay yeeshaan musharixiinta.